PressReader - Ilanga: 2017-10-02 - Inzukazikeyi ngesikweletu
Ilanga - 2017-10-02 - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
SIYAKHALA ngokwenzelwa phansi wuMasipala weTheku isalukazi saseSunshine, eMariannhill, entshonalanga yeTheku esithi sifuna ukudayisela indodakazi yaso indlu yomxhaso kodwa sixakwa wukuthi sikweleta imali engaphezu kuka-R34 000 esingayazi ukuthi ngeyani.
UNkk Ntombi Martha Molefe (76), uthi usegqigqe waze wakhathala ezama ukulungisa lolu daba kodwa lutho izimpendulo eziqondile, ezichaza ukuthi isikweletu ngesani. "Kwamasipala bangitshele ukuthi kangikwazi ukuyidayisa ngoba ngikweleta le mali,” kusho uNkk Molefe.
Uthi kwamasipala kunabamtshele ukuthi kungenzeka lesi sikweletu sidalwa ngamanzi aqhumile ngaphansi kwendlu yakhe, bamcebisa ngokuba ake abheke amapayipi akwakhe. “Ngifune abantu bangibhekela bathola ukuthi kakukho mapayipi aqhumile,” kusho yena.
Uthi uye kwaSizakala watshelwa ukuthi lesi sikweletu sizocishwa egameni lakhe ngoba kasaziwa ukuthi ngesani.
"Ngibuyele khona kwamasipala ngifuna ukuyoqhubeka nezinhlelo zami zokudayisela indodakazi umuzi ngatshelwa into efanayo - ukuthi kangikwazi ukuwudayisa ngoba isikweletu kangikasikhokhi futhi siyakhula," kusho yena.
Uthi ishintshile inkulumo watshelwa ukuthi isikweletu ngesendawo okwakhiwe kuyona indlu yakhe kwazise yinkulu kakhulu.
“Lokho-ke nje kuvele kwangiqeda amandla ngoba phela mina ngihlala emxhasweni, kungani kufanele ngikhokhele indawo?,” kusho yena.
UNkk Molefe - ohlala nabazukulu bakhe - uthi kumphatha kabi kakhulu ukuba aze atshelwe ukuthi isikweletu siyakhula ngoba akasazi futhi akazi nokuthi uzoqala ngaphi uma ethi uyasikhokha.
Uthi uyabona nje ukuthi leli yitulo lokuba akhishwe emzini wakhe ngoba nakhu engenayo imali.
“Ngiyabona nje ukuthi kufanele ngiyishiye le ndlu kukhulunywe ukuthi kwandawo yokuhlala kanginayo, kuthiwa mina ngizosikhokha ngani lesi sikweletu ngibe ngingasazi nokuthi ngesani,” kusho uNkk Molefe.
UMnu Mthunzi Gumede okhulumela iMeya yeTheku, uthe njengomasipala kabakugqugquzeli nhlobo ukudayiswa kwezindlu zikahulumeni. “Esingakusho nje wukuthi ugogo makabhale indodakazi yakhe nje ukuthi uyishiyela umuzi ngaphandle kokuthi badayiselane.
"Nangale kwalokho, ukudayiselana ngezindlu ezinjengalezi kujwayele ukudala izinkinga ngoba uma indodakazi yakhe idlula emhlabeni kuqala abazukulu bemkhipha ugogo endlini, kuyoba ngokunye, yingakho singakukhuthazi ukudayiselana ngalezi zindlu," kusho yena.
Uthe kumele uNkk Molefe abuyele ebhilidini iFlorence Mkhize eThekwini, acele incwadi echazayo ukuthi ngeyani imali okuthiwa makayikhokhe.